Matio 9 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
9 Koa niakatra tao an-tsambokely izy ka nankeny ampita, ary nankao an-tanànany.+ 2 Ary nisy lehilahy nalemy nandry teo am-pandriana, nentin’ny olona teo aminy.+ Rehefa hitan’i Jesosy ny finoan’ireo, dia hoy izy tamin’ilay nalemy: “Mahereza, anaka! Voavela ny helokao.”+ 3 Ary ny mpanora-dalàna sasany nanao anakampo hoe: “Manevateva an’Andriamanitra ilehity.”+ 4 Fantatr’i Jesosy ny eritreritr’izy ireo,+ ka hoy izy: “Nahoana ianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo?+ 5 Fa inona, ohatra, no mora kokoa: Ny milaza hoe: ‘Voavela ny helokao’, sa ny milaza hoe: ‘Mitsangàna ka mandehana’?+ 6 Mba hahafantaranareo anefa fa manana fahefana eto an-tany hamela heloka ny Zanak’olona...”,+ dia hoy izy tamin’ilay nalemy: “Mitsangàna, batao ny fandriananao, ary modia any an-tranonao.”+ 7 Koa nitsangana ralehilahy ka lasa nody. 8 Dia raiki-tahotra ny vahoaka nony nahita izany ka nanome voninahitra an’Andriamanitra,+ izay nanome fahefana+ toy izany ho an’ny olona. 9 Rehefa niala teo i Jesosy, dia nandeha ka nahita lehilahy antsoina hoe Matio, nipetraka tao amin’ny birao famorian-ketra. Raha vao nahita azy izy, dia niteny taminy hoe: “Andao hanara-dia ahy.”+ Nitsangana avy hatrany i Matio ka nanaraka azy.+ 10 Taorian’izany, rehefa nandry ilika nisakafo tao an-trano izy,+ dia nisy mpamory hetra sy mpanota maro tonga ka nandry ilika nisakafo niaraka tamin’i Jesosy sy ny mpianany. 11 Nony nahita izany anefa ny Fariseo, dia niteny tamin’ny mpianatra hoe: “Fa nahoana ny mpampianatra anareo no miara-mihinana amin’ny mpamory hetra sy ny mpanota?”+ 12 Ren’i Jesosy izany ka hoy izy: “Tsy ny olona salama no mila dokotera,+ fa ny marary. 13 Mandehana àry, ka ianaro ny dikan’ny hoe: ‘Famindram-po no sitrako, fa tsy sorona.’+ Fa tsy tonga hiantso ny marina aho, fa ny mpanota.” 14 Ary nanatona azy ny mpianatr’i Jaona ka nanontany hoe: “Nahoana izahay sy ny Fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady?”+ 15 Hoy i Jesosy taminy: “Misy antony tokony hampalahelo ny naman’ny mpampakatra ve, raha mbola eo aminy ny mpampakatra?+ Ho avy anefa ny andro hanesorana ny mpampakatra+ tsy ho eo aminy, ka amin’izany andro izany izy ireo vao hifady hanina.+ 16 Tsy misy manampina akanjo tonta amin’ny tapa-damba vaovao. Hisintona be mantsy ilay tapa-damba, ka handrirotra an’ilay akanjo ary vao mainka hitatra ny rovitra.+ 17 Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra efa tonta. Raha izany mantsy, dia ho vaky ilay siny hoditra ka ho raraka ny divay ary ho simba ny siny.+ Fa atao ao anaty siny hoditra vaovao ny divay vaovao, ka tsy simba na ny siny na ny divay.”+ 18 Raha mbola nilaza izany taminy izy, dia nisy mpitantana ny synagoga+ nanatona ka niankohoka teo anatrehany,+ sady nilaza hoe: “Efa maty izay ny zanako vavy.+ Andao re ho any e, ka mametraha tanana aminy mba ho velona izy.”+ 19 Koa nitsangana i Jesosy, ary nanaraka an-dralehilahy izy sy ny mpianany. 20 Ary nisy vehivavy nandeha ra efa nandritra ny roa ambin’ny folo taona,+ nanatona avy tao aoriana ka nikasika ny mikiramborambo amin’ny morontongotry ny akanjony ivelany.+ 21 Fa hoy izy anakampo: “Raha mikasika ny akanjony ivelany fotsiny aho, dia ho sitrana.”+ 22 Ary nihodina i Jesosy ka nahita azy, dia nilaza hoe: “Mahereza, anaka! Ny finoanao no nahasitrana anao.”+ Dia sitrana tamin’izay ora izay ravehivavy.+ 23 Ary tonga tao an-tranon’ilay mpitantana ny synagoga i Jesosy.+ Raha vao nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka nitabataba+ izy, 24 dia niteny hoe: “Mandehana ianareo mivoaka, fa tsy maty razazavavy fa matory.”+ Dia nihomehezan’ireo izy.+ 25 Raha vao tafavoaka ny vahoaka, dia niditra izy ka nandray ny tanan-drazazavavy,+ ary niarina razazavavy.+ 26 Mazava ho azy fa niely eran’ilay faritra ny resaka momba izany. 27 Rehefa niala teo i Jesosy, dia nisy jamba roa lahy+ nanaraka azy sady niantsoantso mafy hoe: “Mba iantrao izahay,+ ry Zanak’i Davida ô!” 28 Nony tafiditra tao an-trano izy, dia nankeo aminy ireo jamba ireo, ka nanontaniany hoe: “Mino+ ve ianareo fa mahay manao izany aho?” Hoy ny navalin’ireo: “Eny, Tompoko.” 29 Ary nokasihiny ny mason’ireo,+ sady hoy izy: “Aoka ho tonga aminareo izany, araka ny finoanareo.” 30 Koa nahiratra ny mason’ireo. Nandrara azy mafy anefa i Jesosy hoe: “Tandremo sao misy mahafantatra izao.”+ 31 Nampiely ny lazany eran’ilay faritra anefa izy ireo rehefa niala teo.+ 32 Nony lasa ireo, dia nentin’ny olona teo aminy ny lehilahy moana iray nisy demonia.+ 33 Ary niteny ilay moana rehefa navoaka ilay demonia.+ Dia talanjona+ ny vahoaka ka nanao hoe: “Mbola tsy nisy toy izao mihitsy teto amin’ny Israely.” 34 Hoy anefa ny Fariseo: “Hery avy amin’ny lehiben’ny demonia no amoahany demonia.”+ 35 Ary i Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra, na kely na lehibe, ka nampianatra tany amin’ny synagoga sy nitory ny vaovao tsaran’ilay fanjakana ary nanasitrana ny karazan’aretina rehetra sy ny karazana kilema rehetra.+ 36 Nangoraka+ izy nony nahita ny vahoaka, satria nampahorina sady naparitaka toy ny ondry tsy misy mpiandry+ ireo. 37 Ary hoy izy tamin’ny mpianany: “Eny, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy.+ 38 Koa iangavio ny Tompon’ny vokatra haniraka mpiasa hijinja ny vokatra.”+